Farmaajo oo laga yaabo inuu Itoobiya kula kulmo Madaxweynaha Somaliland
MUQDISHO, Soomaaliya - Warar hoose oo uu helayo Warsidaha Garowe Online ayaa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo oo hadda ku sugan Jabuuti uu safar ku tagayo Itoobiya, halkaasi oo kaga sii horeeyo Madaxweynaha Somaliland.
Illo Xog-ogaal ah oo ku dhaw Xafiiska Madaxweynaha ayaa u sheegay GO in Farmaajo laga yaabo inuu Addis Ababa kula kulmo Muuse Biixi Cabdi, iyadoo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed uu dhex-dhexaadinayo.
Dowladda Federaalka ayaa mabda'ahaan ogolaatey kulanka, balse waxaa la sheegay in aan la isku afgaran, oo go'aan laga gaarin qaab uu u dhacayo, Goobta iyo kaalinta dalalka dhex-dhexaadinaya.
Wali ma jirto war rasmi ah oo kasoo baxay Villa Soomaaliya oo ku saabsan kulanka Addis Ababa iyo socdaalka la sheegay inuu Madaxweynaha ku tagayo dalka Itoobiya.
Madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi ayaa sanadkii tagey la qorsheeyay inay Jabuuti ku kulmaan, balse baaqday kadib markii Somaliland kala wareegtay Puntland degaanka Tukaraq ee gobolk Sool, January 2018.
Turkiga ayaa dhawaan shaaciyay inuu dhex-dhexaadinyo Somaliland iyo dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, waxuuna u qeybsane arrimahan ugu magacaabey safiirkii hore ee Ankara u fadhiyay Muqdisho, Olgan Bekar.
Muuse Biixi oo dabciyay Mowqif horey uga qaatey Muqdisho kadib kulankii Abiy Axmed
Somaliland 20.02.2019. 22:58
Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa cadeeyay in Somaliland u aqoonsan yahay maamulka kamid ah...
Madaxweynaha Somaliland oo gaarey Imaaraadka [DAAWO]
Somaliland 14.03.2018. 00:48
Muuse Biixi oo weeraray wafdigii DF Soomaaliya ee shirka Jabuuti
Somaliland 18.06.2020. 14:25
Madaxweynayaasha Jabuuti iyo Sudan oo gaarey Itoobiya [Sawirro]
Afrika 08.12.2018. 12:18
Ciidamada Somaliland oo dilay nin u dhashay Itoobiya [Akhri sababta]
Somaliland 22.05.2018. 22:20
Dalabkii Abiy ee dhexdhexaadinta Soomaaliya oo "darbi ku dhacay"
Afrika 23.02.2020. 20:15
Itoobiya oo Saami dhaqaale laga siinayo Dekadda Jabuuti
Caalamka 02.05.2018. 11:45
Falastiin oo ganafka ku dhufatay xil ay ka qaban lahayd Jaamacada Carabta 22.09.2020. 21:20
Axmed Madoobe oo ka digay in la qabyaaladeeyo maqaamka Muqdisho 22.09.2020. 18:25
Villa Soomaaliya oo fahfaahisay heshiisiinta labada aqal ee waddanka 22.09.2020. 16:34
Khilaafkii labada Aqal ee Baarlamanka oo la xaliyey 22.09.2020. 14:12
Puntland oo lagu bogaadiyay doorkeeda heshiiska doorashadda 22.09.2020. 12:01
Cawad oo sheegay in Kursigiisa usoo wareejistay Galmudug 22.09.2020. 11:30